पानी कति पिउने र कसरी पिउने ?: News Of Tokha
-डा. रबिनलाल श्रेष्ठ | पानी र जीवनको गहिरो सम्बन्ध भएझैँ पानी र स्वास्थको पनि गहिरो सम्बन्ध छ । पानीको मात्रा, पिउने समय र पिउने तरिकाले स्वास्थ्य लाभ वा हानीको निर्धारण गर्दछ । हाम्रो शरीरको २/३ भाग पानीले बनेको हुन्छ । पानी बिना शरीर भित्रका कुनै पनि क्रियाहरु सम्भव हुँदैनन् । शरीरका क्रियाहरुमा अवरोध सिर्जना भएमा हाम्रो स्वास्थ्य ब्रि्रन्छ । तर्सथ, हाम्रो स्वास्थ्य पानीमा भर पर्दछ । प्रशस्त पानी सही समयमा र सही तरिकाले पिउने गरेमा हामी धेरै रोगबाट बच्न सक्छौँ ।
शरीरले क्रियाहरु गर्ने क्रममा शरीरमा भएको पानीे, केही मात्रा प्रयोग हुन्छ भने कही मात्रामा शरीर बाहिर निस्कन्छ । यसले गर्दा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन जान्छ । कम भएको पानीको आपूर्तिको लागी पानी पिउनु आवश्यक छ । शरीरभित्रका हरेक क्रियाहरुको लागी पानी अत्यन्त आवश्यक छ । पानीले शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरु र प्रत्येक कोषिकाहरुमा पौष्टिक तत्वहरु तथा अन्य आवश्यक तत्वहरु पुर्‍याउने काम गर्दछ । प्रत्येक कोषिकाहरुमा हुने क्रियाहरु पानीकै साहायतामा हुन्छन् । यी क्रियाहरुबाट निस्कने बिकारहरु पानीले नै विर्सजन अङ्गहरुमा पुर्‍याउँछ र शरीर बाहिर निस्कासन हुन्छ । पानीको अभावमा यी सारा प्रक्रियाहरु अवरुद्ध हुन्छन् जसले गर्दा हामीलाई रोग लाग्दछ । त्यसैले दीर्घकालसम्म स्वस्थ रहनलाई पर्याप्त पानी पिउनु पर्दछ । पानीको सेवनले शरीरलाई सक्रिय बनाउँछ । पाचनतन्त्रलाई स्वस्थ र सबल बनाउँछ, रक्त सञ्चारमा सुधार ल्याउँछ, मृगौलालाई सक्रिय बनाउँछ । पानीले शरीरभित्र रहेका हानीकारक तत्वहरुलाई नष्ट गर्ने कलेजोको काममा मद्दत गर्दछ ।
पानी कति पिउने त?
शरीरले आफ्नो क्रियाहरु गर्दा पानीको प्रयोग गर्नुको साथै शरीरलाई राम्रो परिस्थितिमा राख्न विभिन्न अङ्गहरुबाट केही मात्रामा पानी शरीर बाहिर निस्कासन गर्दछ । साधारणतया केही काम नगरी त्यतिकै बस्दा श्वास-प्रश्वास र छालाको माध्यमबाट ७०० मि.लि, दिसाबाट १०० मि.लि, पिसाबबाट १५०० मि.लि गरि लगभग २.३ लिटर पानी शरीरबाट प्रतिदिन बाहिर निस्कासन हुन्छ तर मौसम र हाम्रो कामको प्रकृति अनुसार शरीरबाट बाहिर निस्कने पानीको मात्रा घटबढ हुन्छ । शरीरमा पानीको सन्तुलन बनाइ राख्न जति मात्रामा पानी शरीर बाहिर जान्छ त्यति मात्रामा पानी पिउनु अति आवश्यक छ । तर्सथ हामीले कुनै काम नगरी बस्दा पनि २/३ लिटर पानी अनिवार्य रुपमा पिउँनै पर्दछ । कामको प्रकृति अनुसार अतिरिक्त पानीको सेवन गर्नु पर्दछ । जाडो याममा ३ लिटर र गर्मी याममा ४ लिटरसम्म पानी पिउन सकिन्छ ।
सफा र स्वच्छ पानी पिउनु पर्दछ । अत्यधिक चिसो र अत्यधिक तातो पानी कहिल्यै पनि पिउनु हुँदैन । पानी सँधै बसेर चुस्की लिँदै पिउनु पर्दछ । एकै चोटि अत्यधिक पानीको सेवन गर्नु हुँदैन । एक घण्टामा एक गिलासको -२५० मि.लि) दरले पानी पिउन सकिन्छ । दिनको ३/४ लिटर पानी पिउनु पर्छ । नियमित रुपमा पानी पिउने बानी बसाल्नु पर्छ । खानासँग पानीको सेवन गर्नु हुँदैन । खानासँग पानी पिउनाले पाचनक्रिया सुस्त हुन्छ र खाना राम्रोसँग पच्दैन । खाना खानुभन्दा १/२ घण्टा अगाडि र खाएको १ घण्टापछि मात्र पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ । तातो पानी अधिक पिउनाले पाचनतन्त्र कमजोर हुन्छ र खाना राम्रोसित पच्दैन । थाकेको अवस्थामा र धेरै पसिना आएको अवस्थामा चिसो पानी धेरै पिउनु हुँदैन । धेरै पसिना आउँदा पसिनाको माध्यमबाट शरीरको ताप बाहिर गइरहेने भएकोले चिसो पानी पिउँदा शरीरको तापक्रम घट्नगई प्रतिकूल असर पर्न सक्छ ।
विभिन्न रोगहरुमा पानीको सेवन
उल्टीपछि पेट दुःखेमा तातो पानी पिउनु लाभदायक हुन्छ । अपचको समस्या भए खाना खानु भन्दा ३० देखि ४५ मिनेट अगाडि चिसोपानी पिउनाले आमाशयका ग्रन्थीहरु सक्रिय हुन्छन् । इन्जाइम्सहरु राम्रोसित स्रावित हुन्छन् र खाना राम्ररी पच्दछ । ज्वरो आएको अवस्थामा चिसो पानी सेवन एकदमै लाभदायक हुन्छ । चिसो पानी पिउनाले शरीरको तापक्रम ०.४ ड्रि्री सेल्सियसको दरले घट्दछ र धड्कनको चाल पनि घट्दछ । छालाको समस्या भएमा चिसो पानी सेवन अत्यन्त लाभदायक सावित हुन्छ । कब्जियतको समस्या भएमा खाना खानु भन्दा १ घण्टा अगाडि २ गिलास चिसो पानी पिउने बानी बसाले कब्जियतको समस्या हल हुन्छ । बिहान उठ्ने बित्तिक्कै पानी पिउनाले पाचन सम्बन्धी रोगहरुबाट मुक्ति मिल्दछ र मुटुको समस्यामा पनि लाभ मिल्दछ । प्रशस्त पानीको सेवनले सबै रोगहरुमा फाइदा पुर्‍याउँछ । नोटः मुटुले राम्ररी काम नगर्ने रोगमा, मृगौलाले राम्ररी काम नगर्ने रोगमा, रगतमा नुनको मात्रा कम हुने र शरीर सुन्निने जस्ता रोगहरुमा चिकित्सकको परामर्श अनुसार पानीको सेवन गर्नु पर्दछ ।
डा.श्रेष्ठ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञ हुन् ।